Simba reData Mining uye Sarudzo Sisitimu Inotsigira | Martech Zone
Chipiri, Zvita 10, 2013 Muvhuro, Zvita 9, 2013 Douglas Karr
Iyi infographic kubva kuNew Jersey Institute yeTekinoroji inoratidza iyo Dhata Mining uye Sarudzo Sisitimu Yekutsigira, ichitsanangura mana mana maitiro akasiyana mukati mehurongwa hwese.
Data Management - inounganidza ruzivo rwunowanikwa nekambani kubva mukutengesa kwavo, zvinyorwa, uye mishumo yevatengi.
Model manejimendi - kuyedza kugadzira mhedziso kubva kune marongero ebhizinesi aripo kuti vaone kana vari kubudirira.
Ruzivo Injini - inotaridzika kugadzira mapadigms matsva ekudyidzana nemaitiro.
User Interface - inobvumira kudyidzana mune iyo data pachayo.
Yekutanga, manejimendi manejimendi, inounganidza iwo ruzivo rwunowanikwa nekambani kubva mukutengesa kwavo, zvinyorwa, uye mishumo yevatengi. Model manejimendi anoedza kugadzira mhedziso kubva kune aripo mabhizinesi marongero ekuona kana ivo vari kubudirira. Injini yekuziva inotarisa kugadzira mapadigms matsva ekudyidzana nemaitiro. Chekupedzisira, mushandisi interface inobvumidza kudyidzana mune iyo data pachayo. Chikamu chimwe nechimwe chegadziriro chinogona kutyaira chimwe chikamu.
Tags: Data managementdate kucherainjini yekuzivakutsvakurudza misikamodhi manejimendiuser interface
Iyo Inopindirana Infographic Maitiro
Ndira 13, 2014 na8: 15 PM
Inobatsira inobatsira infographic pakushandisa kwemigodhi yedata. Kutenda nekugovana ruzivo rwakadai.